တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူ၊ ကျူးကျော်သူ မရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လ၀က၀န်ကြီးတို့၏ သက်သေခံချက်များ | Ko Rohingya
တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူ၊ ကျူးကျော်သူ မရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လ၀က၀န်ကြီးတို့၏ သက်သေခံချက်များ
“ကျနော်တို့ ကွင်းဆင်းပြီးတော့ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ် ၀င်ရောက်လာတဲ့သူတွေက မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။”
နစကနဲ့ လ၀က နှစ်ဖွဲ့စလုံးက ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေနဲ့ ဇွန်လတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခအပြီး စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ သုံးနှစ်အတွင်း တိုးလာတာ (၄၇, ၀၀၀) ကျော်လောက် တိုးလာတာ တွေ့ရကြောင်း၊ အဲဒီအထဲမှာ ခိုးဝင်လာတာ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ရကြောင်း။ သို့သော် ဒါအမှန်လို့ ပြောလို့မရကြောင်း၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှောင်တိမ်းနေသူတော့ ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ စစ်ဆေးချင်သေးတယ်ဆိုရင် မကျေနပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အချိန်မရွေး ထပ်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်း စိန်ခေါ်သွားပါတယ်။
၁။ ဗွီအိုအေ မြန်မာဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို နေပြည်တော်မှာ သွားရောက် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း၊ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်၊ ထုတ်လွှင့်-14.08.2012
၂။ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းကို နိုင်ငံခြားသား ဝင်ရောက်မှု အခြေအနေတွေ အပေါ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီကို ကိုကျော်ကျော်အောင်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်၊ ထုတ်လွှင့်- Sep 13, 2012
This entry was posted on February 6, 2013, in ဗီဒီယို, မီဒီယာ, ဆောင်းပါး and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သမ္မတ, ဦးခင်ရီ, ဦးသိန်းစိန်, မြန်မာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ခေတ်ပညာတတ် မွတ်စလင်မ်တွေ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ
ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းဆိုင်ရာ စကားစစ်ထိုးပွဲ ဘာကြောင့် စီစဉ်ပေးရတာလဲ။ →